Music Video – Himalayan Pictures
गायक कुमार लामाको नेपाल भाषाको जागरण गीत ‘दाजु काजि ताता केहे ‘ रिलिज
गायक कुमार लामा योञ्जनको नेपाल भाषाको नया गीत रिलिज भएको छ । ” हाम्रो स्वाभिमान ,कला संस्कृति ,हाम्रो पहिचान ! ” भन्ने मूल भाबको गीत ‘दाजु काजि ताता केहे ‘ युटुब मार्फत सार्बजानिक भएको हो । कला सस्कृतिको संरक्षणमा हामि सबै एक हुन पर्छ मूल मर्म सहितको गजरण गीत रिलिज भएको हो ।
हरिकृष्ण महर्जनको सब्द रहेको गीतको संगीत भने निङ्गमार घिसिङले गरेका हुन् । गायक योञ्जन कै एरेन्ज रहेको गीतको भिडियोले सास्कृतिक एकतामा जोड दिद्दै र सास्कृतिक दमनमा उठेको सरकारका बिरुद्द एक हुन् सन्देस दिएको छ ।
नरहरिको गीतमा प्रेम कर्जा माग्दै नायक दिलिप रायमाझी
भर्साटाइल गायक नरहरि प्रेमीको नया गीत प्रेम कर्जा रिलिज भएको छ । सर्जक प्रह्लाद सुबेदीको सब्द रचना रहेको गीतलाई प्रेमी आफैले कम्पोज गरेका हुन् । बेरोजगारलाई प्रेममा बाधा भएको भन्दै विभिन्न सम्बन्धित निकायमा गीतले प्रेम कर्जाको लागि आकर्षक रुपमा माग गरेको छ । आकर्षक बनेको गीतको भिडियोमा नायक दिलिप रायमाझी र सृजना जिसी को अभिनय रहेको छ । नायक रायमाझी लामो अमेरिका बसाइकै क्रममा बेलाबखत मा सुटुक्क नेपाल आएर भिडियो खेल्दै आएका छन् ।
रंजित कुमार केसीको निर्देशनमा बनेको गीतको भिडियोलाई प्रह्लाद सुबेदीको युटुब च्यानल मार्फत सार्बजानिक गरिएको हो । सकारात्मक प्रतिक्रिया सहित दर्शकको राम्रो साथ गीतले पाइरहेको छ ।
प्रोसिसको निर्देशनमा गायक कार्कीको ‘उहीसंग बिहे गर’ रिलिज
काँठ क्षेत्रका चर्चीत गायक उद्दब कार्कीको नयाँ गीत ” उही संग बिहे गर” को म्युजिक भिडियो सार्बजानिक भएको छ । पार्वती कार्की र उद्धब कार्कीको सुमधुर स्वरमा सजिएको गीतलाइ संगम थापा र पार्वती कार्कीले रचना गरेका हुन् । संगम र पार्वती कै संगीत रहेको गीतको भिडियोलाइ शिवपुरी म्युजिक प्रालिले निर्माण गरेको हो ।
प्रोसिस तिमल्सिनाको निर्देशनमा बनेको भिडियोलाई बिरेन्द्र भट्टले खिचेका हुन् । अनु पराजुली , बिक्रम थपलिया , रिता थापा , उद्धब कार्की , पूर्णप्रसाद ढुंगाना , राधिका संजेल तथा बाल कलाकार रिदम सुबेदी र प्रितिका पौडेल लगायतकलारको भिडियोमा अभिनय रहेको छ । अनिल रानाले गीतको भिडियो सम्पादन गरेका हुन् ।
छाडा अनि दोहोरो अर्थ लाग्ने गीतले नेपाली लोक संगीतलाई कुरुप बनाइरहेको अबस्थामा रिलिज भएको यो मौलिक गीतले काँठे गीतको क्षेत्रमा थोरै भए पनि सकारात्मक ईट्टा थप्न सक्ने निर्देशक तिमल्सिनाले हामीलाई बताएका छन् । गीतको सफलताको कामना सहित हेर्नुहोस तपाई पनि यो भिडियो ।
वियोन्ड र निर्जलाको बाजीको गीत सार्बजनिक
चलचित्र ‘जोनी जेन्टलमेन’ तथा दर्जनौ म्यूजिक भिडियोहरु तथा ‘हाम्रो हाईस्कूल’ र ‘रङ्ग टाईम’ जस्ता वेब सिरिज निर्देशन गरेका नितिन चन्दले नयाँ वेब सिरिज ‘बाजी’ तयार पारेका छन् । हालै मात्र यो सिरिजको गीत र पोस्टर सार्वजनिक गरिएको छ । सार्वजनिक गीतमा स्वचित शाक्यको शब्द, संगीत तथा स्वर रहेको छ ।
‘बाजी’ रोमान्टिक थ्रिलर जनरामा बनेको सम्भवत पहिलो नेपाली बेव सिरिज रहेको बताईएको छ । दुई साथीबीच भएको सामान्य चुनौतीले कसरी जीन्दगी नै बाजीमा पर्छ भन्ने मूख्य बिषय उठान भएको ‘बाजी’ प्रेम, द्वन्द्व तथा बदलाको कथामा बनेको निर्देशक चन्दले बताए ।
‘बाजी’मा वियोन्ड र निर्जला खनालको प्रमूख अभिनय रहेको छ । वियोन्ड नयाँ पुस्तामाझ चर्चित गायक, गीतकार तथा संगीतकार हुन् । उनका ‘आईदेउ न’, ‘लै लै’, ‘किच किच’, ‘ओ मैचा’ लगाएतका गीतहरु यूट्युबमा निकै चर्चित छन् । निर्जला चर्चित आरजे हुन् । वियोन्ड र निर्जलाले ‘पर्खाई’ नामक लघु चलचित्रमा अभिनय गरिसकेका छन् । उक्त चलचित्रमा यो जोडीलाई रुचाईएको थियो ।
यो सिरिज जेठ २ गते देखी प्रत्येक बिहिवार योर स्टाईलको यूट्युब च्यानल मार्फत प्रसारण हुने बताईएको छ । योर स्टाइल र सिनेमाघर एपको सहकार्यमा बनेको यो सिरिज आठ श्रृंखला सम्म प्रसारण हुनेछ । योर स्टाइल र सिनेमाघरले आगामी दिनमा पनि यसैगरी सहकार्य गरेर वेब सिरिज बनाउने सिनेमाघर एपका कार्यकारी सागर खरेलले बताए ।
काठमाडौँको तापक्रमशून्य डिग्रीमा, केही दिनमै माइनसमा झर्न सक्ने : बचौ चिसोबाट
काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाको तापक्रम शून्य डिग्रीमा झरेको छ । तापक्रम घटेसँगै आज यस वर्षकै बढी चिसो महसुस गरिएको छ । उपत्यकासहित देशभर चिसो बढेको छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज उपत्यकाको तापक्रम वर्षकै सबभन्दा कम मापन गरिएको छ । आज काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम ० दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसमा झरेको छ । आइतबार काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम १ दशमल ...
गजलमा जले पुरूषोत्तम – ‘रसुवा’ (भिडियो सहित )
बनी राप चर्को जलायौ तिमीले
मलाई खरानी बनायौ तिमीले।
निको हुन्छ झट्टै बिमारी हजुर्को
भनी हातमा बिष थमायौ तिमीले।
निकालेर फाल्यौ दया प्रेम भूली
बडो प्रेमले जुन सजायौ तिमीले ।
निषेध पस्नलाई गर्यौ आजदेखी
नजरबाट सोझै हटायौ तिमीले।
यतीसम्म झुठो हुँदो रै’छ माया।
दियौ चोट दिलमा दुखायौ तिमीले ।
गजलकार – पुरूषोत्तम पौडेल – ‘रसुवा’
गजलमा जले पुरूषोत्तम – ‘रसुवा’ (भिडियो सहित )﻿
गजलमा जले पुरूषोत्तम
नेपाल आइडल रवि ओडलाई मातृशोक, करेन्टले लियो अल्पायुमै ज्यान
जीवन खुशी र दुख्खको संगम त सबैजनाले भनेकै थिए । । तर कहिलेकाँही जीवनमा एकैफेर बहुतै खुशी अनि दर्दनाक दुखको बाढी आइदिन्छ कि मान्छे आँफै अक्क न बक्क पर्दछन् । गत हप्ता नेपालीहरु रवि ओडलाई शुभकामना अनि बधाई दिन आतुर थिए । समग्र सुदुर पश्चिम लगायत नेपाल नै रवि ओडको खुशीमा मुस्कुराँउदै थिए । तर आज बिहान रवि ओडको आमाको मृत्यूको खबरले खुशीका तन्तुहरु चिस ...
कृषिमा क्रान्ति – ब्याएका गाईभैंसीलाई पनि हजार रुपैयाँ सुत्केरी भत्ता !
सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाले कृषकहरुलाई पशुपालन व्यवसायप्रति आकर्षित गर्ने उद्देश्यले सुत्केरी पशुलाई भत्ता दिन सुरु गरेको छ । नगरक्षेत्रभित्रका कृषकले पालेको गाई भैंसी ब्याउदा सुत्केरी खाद्यान्न सहयोगका लागि एक पटक नगद एक हजार रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराउन थालिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । सुत्केरी पशुलाई भत्ता दिन कृषकहरुबाट निवेदन सङकलन गर्न सुरु गरि ...
तोइट, बेइज्जत ! ज्यान गुमाएकामा ‘बधाई’ दिने परराष्ट्रको विज्ञप्ति
इन्डोनेसियामा हालै ज्वालामुखी विस्फोटपछि आएको सुनामीमा दर्जनौँको मृत्यु भएको विषयमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा गम्भीर त्रुटि भेटिएको छ। परराष्ट्रले राष्ट्रपति कार्यालयको हवाला दिँदै जारी गरेको विज्ञप्तिमा मानिसहरूको मृत्यु भएको विषयमा ‘बधाई’ दिएको जनाइएको छ। विज्ञप्तिमा गणतन्त्र इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति जोको वि ...
बहकिने मनका महाबिरको मोडल आस्मा संगको रोमान्स
चर्चित रेडियो कार्यक्रम बहकिने मनका प्रस्तोता एबम मोडल तथा कलाकार महाबिर बिस्वकर्मा र मोडल आस्माको रोमान्स सिन सार्बजनिक भएको छ । हेर्नुहोस तपाई पनि ।